ကျွန်တော်ချစ်သော အနုပညာသစ် (သို့ မဟုတ်)လျှို့ ဝှက်အလင်းကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော်ချစ်သော အနုပညာသစ် (သို့ မဟုတ်)လျှို့ ဝှက်အလင်းကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း
Posted by alinsett on Jun 3, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. |5comments
၁/အနုပညာသစ်…တဲ့ ။ အနုပညာသစ်ဆီကို အနုပညာသမား တစ်ချို့ချီတက်နေကြပြီ။တစ်ပြိုင်နက်ထဲ မှာပဲ…ဂန္ထ၀င်အနုပညာ သည်သာ..အနုပညာအစစ် ဆိုပြီး…ဖက်တွယ်ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ ကြသူတွေကလည်း ရှိနေလေရဲ့ ။
ဆိုးတာက ကျန်ရစ်ခဲ့ ကြသူများက အေးအေးလူလူ မကျန်ခဲ့ ကြဘူး။လက်ပြ နှုတ်ဆက်ချင်ပုံ လည်းမရဘူး။ အနုပညာသစ်…ဆိုတာ ဘာ ညာ ဆိုပြီး….. အပြစ်တွေ ရှာကြ၊ စွပ်စွဲ ကဲ့ ရဲ့ ကြ၊ (အားလုံးကို မပြောပါ။ ) အဲဒီမှာပဲ….အနုပညာသစ် ကို ချစ်မိကြတဲ့အနုပညာသမားတွေ နဲ့အနုပညာဟောင်းကိုပဲ…ဦးခိုက်ပူဇော် ကျန်ရစ်ခဲ့ ကြသူ အနုပညာသမားတွေ….စိတ်ထားတွေ ကွဲလွဲ…..စကားလုံးစစ်ပွဲ တွေ ဖြစ်…….၊စာပေ တိုက်ခိုက်မှု…….တွေပေါ့။
အနုပညာ ဟာ လည်း….အလွှာ နှစ်လွှာ / အမျိုးအစားနှစ်ခု ရယ် လို့.. ကွဲပြား ခြားနားသွား…..၊(အနုပညာ ဟာ အလည် တည့်တည့်ကနေ နှစ်ခြမ်း အခြမ်း ခံလိုက်ရ……..။)
၂ / ကျွန်တော့် သဘော ပြောရရင်တော့..အနုပညာ ကို အသစ်/အဟောင်း..ရယ်လို့နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီး ကန့် သတ် ဆက်ဆံ ပစ်လိုက်တာမျိုး ကို မဖြစ်စေချင်ဘူး။ (တကယ်ပါ)
အနုပညာ ဟာ သစ်ပင် ဆိုပါစို့ ။ လောကမှာ သစ်ပင်ဆိုတဲ့သဘော တစ်ခုရှိတယ် ၊ ဒါပေမယ့် သစ်ပင်အမျိုးအစားတွေ ကတော့ အများကြီး ကွဲပြားခြားနားစွာ.. ရှိနေကြတယ်။
ပန်းပွင့် တဲ့ သစ်ပင်၊ ပန်းမပွင့်တဲ့ သစ်ပင်..၊ နှင်းဆီပင်၊ ကျွန်းပင်၊
သရက်ပင်၊ ပိတောက်ပင်၊ ခရေပင်…..စသဖြင့်…အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် သစ်ပင်ဆိုတဲ့သဘော ( ထပ်ပြောပါ့မယ် ။ သဘော…..) ကတော့ လောကမှာ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။
အဲဒီလိုပါပဲ..။ အနုပညာကို မော်ဒန်အနုပညာ ၊ ဂန္ထ၀င်အနုပညာ ..စသဖြင့်…အမျိုးမျိုး ခွဲခြား / သတ်မှတ် လိုက်ပေမယ့် အနုပညာ ဆိုတဲ့ 
သဘော (သဘော…) ကတော့ တစ်ခုတည်းပါပဲ။
၃ / သစ်ပင်တွေ ဟာ ကိုယ်စီ…. ပန်းတွေ ပွင့်ကြပါတယ်။
တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်.. ပွင့် တဲ့ ပန်းချင်းမတူကြပါဘူး။ မတူခွင့် ရှိတယ်။
ဒီလိုပါပဲ..။ အနုပညာမှာလည်း…. တင်ပြပုံ / ဖန်တီမှု ဖော်ပြ
ချက်တွေ… အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေကြပြီ….။ ကွဲပြား ခြားနားစွာ…တင်ပြ
(ဖော်ထုတ်ပြ) ခွင့် လည်းရှိတယ် ။( ရှိတယ်…။ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော် ယူဆ
တယ်။ ကျွန်တော့် ယူဆ ချက်ပါ ။ သဘောမတူလည်း ..ရပါတယ်။)
အနုပညာအမား အချင်းချင်းကလည်း….ကိုယ့်အပင်မှာ ပွင့်တဲ့ ပန်း
နဲ့သူ့ အပင်မှာ ပွင့်တဲ့ ပန်း.. လို့ ပဲ… မြင်သင့်တယ်။
သူ့ ပန်းပွင့်က မလှ ဘူး။ ငါ့ပန်းကလေးကမှ လှတာ… ဘာ ညာတွေ လျှောက်ပြောနေမယ့်အစား……. ….. …
ပန်းဆိုတာ လောကကို အလှဆင်ပေးနိုင် ရင် ရပြီ….ဆိုပြီးကျေနပ်နိုင်ရမယ်။
ဒါက ဖန်တီသူ( အနုပညာသမား) တွေ ဘက်က တာဝန် ပါ။
၄ / ခံစားသူ (လေ့ လာသူ) တွေဘက်ကလည်း…တာဝန်လေးတွေရှိလာပါတယ်။
ပန်းတွေကို ကြည့်ပြီး…..ဒီပန်းကတော့ ငါကြိုက်တဲ့ပုံစံ မဟုတ်လို့
မကြိုက်ဘူး။ ပန်း ပုံစံကိုက ကျက်သရေမရှိဘူး…ဘာညာကွိကွ..တွေ
လျှောက်ပြောပြီး…. ကိုယ့် အကြိုက်နဲ့ ညီတဲ့ပန်းကိုပဲ အမွှန်းတင်နေရင်
ဒါဟာ အစွန်းရောက်မှု ပါ။
ဆရာကြီး ဇော်ဂျီ ရဲ့ဂန္ထ၀် ကဗျာ ကို မှ ကြိုက်သူက
တာရာမင်းဝေရဲ့ …မော်ဒန်ကဗျာကို… ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာ ၊ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချ တာဟာ မငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖန်တီးတာပါပဲ။
မကြိုက်ရင် ( ခံစားလို့မရရင်/ နားမလည်ရင်) မော်ဒန်ကဗျာကို မဖတ်နဲ့ ။ ဒါပဲ။ ကျွန်တော် လက်မခံနိုင်ဆုံးသော အချက်ကတော့.. .. ..
၅ / ဆိုပါစို့ …။ တာရမင်းဝေ ရဲ့ကဗျာကို ဖတ်ပြီး
နားမလည်ဘူး…. လို့ ပြောခွင့်ရှိပါတယ် ။ (။ပြောသင့်ပါတယ်။)
ဒါဟာ အနုပညာ မှ မဟုတ်တာ ။မဟုတ်ဘူး …. လို့တော့ မှတ်ချက်ချခွင့်
မရှိဘူး ။(မရှိသင့်ဘူး)။ ကျွန်တော့် ယူဆမှုပါ။
မော်ဒန်စာပေ အနုပညာ ပစ္စည်းတစ်ခုက်ု နားမလည်တာနဲ့/ မ
ကြိုက်တာနဲ့ ပဲ….အနုပညာပစ္စည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရင် လွန်ပါတယ်။
ဖန်တီးသူကိုလည်း အနုပညာသမား မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောရင် ထပ်လွန်ဦး
၆ / အနုပညာကို တံဆိပ်မျိုးစုံ….ကပ်ပြီး…ခွဲခြား ဆက်ဆံနေတာ ထက်……… အနုပညာ မှန်ရင်… လောက ကို အလှဆင်
နိုင်ဖို့သာ လိုတယ်……..လို့ကျွန်တော် ထင်မြင် ယူဆပါတယ်။
၇ / အနုပညာ အကြောင်းပြောရင်… ကျမ်းကြီးတွေ အစောင်စောင် ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲ…ဆိုတော့… အစကတည်းကိုက အနုပညာဆိုတာ
အင်မတန်…. ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းလွန်းလို့ ပါပဲ။
အခု ကျွန်တော်က အတို့အထိလောက်ပဲ တင်ပြသွားပါတယ်။
လွဲချော်နေတဲ့ ယူဆချက်တွေ မပါလောက်ဘူး လို့ လည်း ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ထက် တတ် / သိ သူတွေ ၀င်ပြောကြပါဦး..လို့ 
ပြောပါရစေ။ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့အနုပညာ အကြောင်း…
ဆွေးနွေး (ငြင်းခုံ) ရတာ ပျော်စရာ လည်းကောင်းသလို အကျိုးလည်းရှိ မှာပါ။ အကြေ်ငးညီညွတ်ရင် ဝေဖန်ရေးသမား နဲ့ အနုပညာ.၊ ဂရိဒသန
ပညာရှင်ကြီး ပလေတို (Plato) ရဲ့Republic ကျမ်းကြီးထဲ က
Mirror Theory (ကြေးမုံ သီဝရီ ) အကြောင်းတွေ ကို တင်ပြ ချင်ပါသေးတယ်။
ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးတွေ ကို ဖတ်ပြီး ဝေဖန် အကြံပေးပါဦးလို့ ပြောပါရစေ။ အနုပညာရသတွေ အကြောင်း မေးလာသူ အတွက်လည်း တစ်ခုခု ရေးဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ …။ အကြောင်း ….ညီညွတ်ရင် ပေါ့ဗျာ…။
2 / 6/ 2011 /
ည …..12း25 /
ဦးလေးတော့ လိုက်မမှီတော့ဘူးဖြစ်နေတယ် …..
ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ် .. ကြိုးစားပြီး လိုက်ကြည့်ပါ့မယ် …………..။
ပါတယ်။‌ရွှေဥ‌ဒေါင်း တို. ပီမိုးနင်းတို.စာအုပ်‌တွေဆိုရင်အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ငါ့စာ‌ပေမှဆြိုပီး‌တော့လည်း
တစ်ယူသန်မဟုတ်ပါဝူး။ ဆရာ‌ဇော်‌ဇော်‌အောင်ေ ပြာသလိုပဲနားမလည်ဝူးဆိုရင်မဖတ် ကြပါနဲ.။
ဖတ် ပြီးလို.နားမလည်ဝူးဆိုရင်ပို ပြီး‌တော့‌တောင်မ‌ဝေဖန်သင့်‌တော့ဝူး။ကိုယ့်မှနားမလည်တဲ့အရာ
ဒါကိုမှလက်မခံနိုင်ပါဆိုရင်‌တော့း-)း’-)
ကဗျာရေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ half by half တဲ့။ ရေးသူကတစ်ဝက် ပြောပြမယ်။ ဖတ်သူက ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကို တွေးယူရမယ်တဲ့။ အဲဒါမှ ရသမြောက်တယ် ပြောတာပဲ။ သူရေးတဲ့ ကဗျာတွေကိုလည်း နားမလည်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ဖူးပေမယ့် အလင်းဆက်ပြောသလိုပဲ မကောင်းဘူးလို့တော့ မပြောဖူးဘူး။
အခုရေး မယ့်စာက ကြားဖြတ်ပြောပြစရာလေးမို့ရေး တာပါ ။ မူလ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါး အစီအစဉ်
တွေထဲ မှာ ဒါတွေ မပါပါဘူး။ အခု ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးဝေဖန်ထားသူတွေရဲ့စကားလေးတွေ ကို လေးစားစွာ..ပြန်ကြားခြင်းပါ။
ပထမဆုံး moeminthar ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကိုဖြေပါ့မယ်။
အလင်းဆက် က မော်ဒန်သမားလား…..တဲ့ ။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က မော်ဒန်သမား မဟုတ်ပါဘူး။
အနုပညာသမားပါ။ အနုပညာ ကို ချစ်တဲ့(ထပ်ပြောပါ့မယ် ၊ အနုပညာကို အသက်နဲ့ ထပ်တူ ချစ်တဲ့ )
စာပေသမားတစ်ဦးပါ။ (ပညာရှင်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သိသလောက် တွေးမိသလောက်လေးတွေကို ကောင်းမယ်ထင်လို့ ပြောနေတာပါ။ အနုပညာအကြောင်းပြောရတာဟာ ဘာနဲ့ မှ မတူတဲ့ အရသာ ကိုပေးပါတယ် ။ ပြောသလောက်ကို လည်းသေချာ စဉ်းစားပြီးမှ ပြောပါတယ်။။)
ဒုတိယ … ပြောချင်တာက captainamerica ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေ…..။ကျွန်တော့်ကလောင်နာမည်
က အလင်းဆက် ပါ။ ဆလိမ်နဲ့ ဆက် ပါတယ်။ ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ ဆရာ ဦးဝင်းငြိမ်းကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ကလောင်တွေ ဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်း ၊ အလင်းစက် ၊ လူမင်နရီ ၊ ကိုယ်ပွား…. ဆိုတဲ့ 
နာမည်လေးခု ထဲ က တစ်ခုကိုရွေးပေးပါ ဆိုတော့ ဆရာ ဦးဝင်းငြိမ်းက အလင်းစက် ကို ရွေးပေးပါတယ်။
အလင်းစက်နဲ့ စာတွေရေး ဖို့ပါ ။ ကျွန်တော်က လက်ခံခဲ့ ပါတယ် ။ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ရက်မှာပဲ
အလင်းစက်…ကနေ အလင်းဆက် ကိုပြောင်းလိုက်ရပါတယ်။
အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပါ။ အခု မိတ်ဆွေ ပြောတာတွေက ကျွန်တော်နဲ့ အယူအဆတွေ တူနေပါတယ်။လွတ်လပ်စွာ တူညီခွင့် လွတ်လပ်စွာ…သဘောထားကွဲလွဲခွှင့်တွေ ရှိတယ် ။ ဒါကို တရားသဘောလေး နည်းနည်း ထည့် ပြီးကြည့်ရင် အမြင်တွေကြည်သွားပါလိမ့်မယ်။
မိတ်ဆွေ ကို လေးစားစွာ…ခင်မင်လျက်ပါ။ ဆွေးနွေးချင်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
fatty ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေကိုလည်းလေးလေးစားစားနဲ့ ကို ခင်မင် မိပါတယ်။
လိုက်လို့မမီတော့ဘူး (နားမလည်ချင်ဘူး) ဆိုတဲ့ကျွန်တော် အယူအဆတွေကို ကောင်းပါတယ်……ကြိုး
စားပြီးလိုက်ကြည့်မယ်…..ဆိုလို့ပါ။ ဒီလို သဘောထားကြီးတဲ့ စာပေချစ်သူတွေ စာပေလောကမှာ အမှန်တကယ် ကို လိုအပ်နေပါတယ်။ နားမလည်အောင်ရေးတော့ ဆဲတယ်ကွာ….ဆိုတဲ့လူတွေကို ခင်တာထက် အများကြီးပို ခင်မင်မိပါတယ်။
ma ma ကိုလည်း အဲဒီလိုလေး သက်သက်ညှာညှာ တွေးတတ်လို့ လေးစားပါတယ်။ Ma Ma ပြော
တဲ့half by half ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး နဲ့ တူတဲ့ သီဝရီ တစ်ခု အနုပညာ မှာရှိနေပါတယ်။
မော်ဒန် အနုပညာ အတွက် လို့ ပဲ ထင်ထားပါတယ်။ ကဗျာ တစ်ပုဒ် ( အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခု)ကို
ရေးသူ (ဖန်တီးသူ)နဲ့ အတူ ဖတ်သူ (ခံစားသူ) က ပါ ပူးပေါင်းပါဝင် ခံစားရတယ်…တဲ့ ။
ကျုပ်ကတော့… “အနုပညာ ဖန်တီးရာမှာ.. အားထည့် မလုပ်သင့်ပါ” ဆိုတာလေး ထပ်ဖြည့်ချင်ပါ့ဗျာ…။
အတင်းအဓမ္မ မဖန်တီးရဘူးဆိုတာပါ..။ အသစ်ဖြစ်ဖြစ်..အဟောင်းဖြစ်ဖြစ်… အနုပညာကို.. (နှလုံးသားနောက်ကို.. မျှောလိုက်ပြီး..)ဖန်တီးသင့်တာပေါ့..
Plato ရဲ့The Republic ကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်တာလေးတွေတော့ ဖတ်ကြည့်ချင်မိပါရဲ့..။